Haweeney Kamid ah Saraakiisha Sare ee Al-Shabaab oo Muqdisho Lagu Qabtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Haweeney Kamid ah Saraakiisha Sare ee Al-Shabaab oo Muqdisho Lagu Qabtay
Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Mmuqdisho ku qabtay haweeney sarkaal sare ah oo ka tirsan Al-Shabaab.
Howlgalkaan lagu qabtay haweeneyda ka tirsan madaxda Al-Shabaab oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa laba habeen kahor ka dhacay xaafadda Xamar Jadiid ee magaalada Muqdisho.
Haweeneyda la qabtay ayaa la sheegay inay tahay madaxa Al-Shabaab u qaabilsan Canshuuraha gobolka Banaadir.
Xog hoose oo laga helay qaabka lagu qabtay haweeneydaan ayaa sheegeysa in ciidanka sida gaarka ah u tababaran ay mid kamid ah taleefanada ay isticmaasho haweeneydaan ku xireen qalab sheegaya qofka meesha uu joogo.
Ciidamada ayaa intaas kadib galay guriga haweeneydaan oo ku yaala xaafadda Xamar Jadiid xilli ay hooyga ku sugneyd iyagoo sidoo kale soo qabtay saddex ruux oo kale, sida aan xogta ku helnay.
Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa noo sheegay in guriga haweeneyda ay deganeyd oo bam lagu furay ay sidoo kale ku xirnaayeen Kaamirooyinka qarsoon ee CCTV.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in haweeneydaan ay bedeshay madixii Al-Shabaab u qaabilsanaa Canshuuraha gobolka Banaadir oo iminka gacanta ugu jira dowladda federaalka kadib markii dhowr bilood kahor lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Haweeneydaan ayaa la sheegay inay isticmaasho magacyo badan oo ay kamidyihiin Tabliiqa, Marwo Sahro iyo magacyo kale oo dhowr ah.
Laamaha ammaanka dowladda federaalka ayaanan wali ka hadlin qabashada haweeneydaan.
Xaaf oo xilalkii ka qaadey maamulka Gaalkacyo